radar system မှာ Simple signal နှင့် complex signal တို့အားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > radar system မှာ Simple signal နှင့် complex signal တို့အားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
View Full Version : radar system မှာ Simple signal နှင့် complex signal တို့အားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Probing signal (သို့) detecting signal တွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်သလဲဆိုတာပြောပြီးမှ simple signal နဲ့ complex signal တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ရအောင်ဗျာ။ Probing signal တွေကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ ပေးထားသော coordinate ဖော်ပြချက်တွေရဲ့တိကျမှူ၊ range ,speed,angle အစရှိတဲ့coordinateတွေရဲ့resolution ၊ ရရှိတဲ့ given measurement accuracy၊ hardware ပိုင်းတည်ဆောက်ရာမှာ နည်းပညာလွယ်ကူမှူ ၊ noise-immunity၊ ရရှိတဲ့ operating zone of radar၊ နှင့် generation of signal လွယ်ကူမှူတို့ကိုကြည့်ရှူရွေးချယ်ပါတယ်။Probing signal (သို့) detecting signal တွေမှာ simple signal နှင့် complex signal ရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
Simple signal ဆိုတာ radio signal ပါ။ဘယ်လို radio signal လဲဆိုတော့ base (B=1)ဖြစ်တဲ့ signal မျိုးကို ခေါ်တာပါ။B=∆fc . τ =1 ပေါ့ ။ τ ဆိုတာက pulse duration ပါ။ ∆fc ကတော့ bandwidth ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-τ= 100 µs, ∆fc=10 kHz မှာဘေ့စ် B=1.အောက်မှာ simple signal နဲ့သူ့ရဲ့ spectrum ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.AceLayouts.com/uploads/images/2008-10-21/EDAuegfoGH.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com/upload&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.AceLayouts.com/uploads/images/2008-10-21/6D3dotTC7l.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com/upload&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;/a&gt;
သူ့မှာအပြစ်အနာအဆာတွေ ၊ limitation တွေရှိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ range resolution ဟာအရမ်းသေးငယ် ယုံတင်မကပဲ သူ့ကို pulse duration တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်တယ်မဟုတ်လား။သူ့ရဲ့ range resolution ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်း narrow pulse တွေထုတ်ဖို့က limitation တွေရှိပြန်ရော။နောက်တစ်ချက်က operating zone of radar နဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖော်တဲ့ mean power ဟာ pulse power ရဲ့တန်ဖိုးကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ဒါတင်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပြန်ဘူး။simple signal ကိုသုံးရင် range resolution နဲ့ velocity resolution နှစ်ခုလုံးကောင်းအောင်ညှိဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှကိုမဖြစ်နိုင်တာ။ range resolution ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရင် velocity resolution ကကျ ၊ velocity resolution ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရင် range resolution ကကျဖြစ်ရော။ဒီအပြစ်အနာအဆာတွေမပါချင်တဲ့အတွက် ၊ limitation တွေမရှိစေချင်တဲ့အတွက် complex signal ဆိုတာကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Complex signal ဆိုတာ radio signal ပါ။ဘယ်လို radio signal လဲဆိုတော့ base B ဟာတစ်ထက်ကြီးတဲ့ signal မျိုးကို ခေါ်တာပါ။ B=∆fc . τ ≤1 ။ သူ့မှာတော့ pulse duration ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီး range resolution ဟာမြင့်မားပါတယ်။ပြီးတော့ဘာမှဆက်သွယ်ချက်မရှိတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ range resolution နဲ့ velocity resolution ကိုရရှိပါတယ်။ Complex signal ထဲကကျွန်တော်ဥပမာလေးနှစ်ခုလောက်ထုတ်ပြပါမယ်။
ပထမတစ်ခုက linear frequency modulation signal ပါ။ τ= 100 µs, ∆fc=10 mHz မှာဘေ့စ် B=1000 အောက်မှာ linear frequency modulation signal နဲ့သူ့ရဲ့ spectrum ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.AceLayouts.com/uploads/images/2008-10-23/BiCY8h5NvV.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com/upload&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.AceLayouts.com/uploads/images/2008-10-21/t3Xw8StOh2.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com/upload&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;/a&gt;
နောက်တစ်ခုက phase manipulation signal ပါ။သူ့ရဲ့ phase က discretely ဖြစ်ပြီး သုံည နဲ့ π ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ phase manipulation signal နဲ့သူ့ရဲ့ spectrum ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
τ0 – sampling duration
τ – pulse duration
N – sample အရေအတွက်
&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.AceLayouts.com/uploads/images/2008-10-23/GPuALENW58.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com/upload&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.AceLayouts.com/uploads/images/2008-10-23/uggruSOfqM.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.acelayouts.com/upload&quot; title=&quot;Image Upload - Image Hosting&quot;&gt;&lt;/a&gt;